नेपाली बजारमा आइफोन इलाभेन, इलाभेन प्रो र इलाभेन प्रो म्याक्सको मूल्य कति?
नेपाली बजारमा आइफोन इलाभेन, इलाभेन प्रो र इलाभेन प्रो म्याक्सको मूल्य कति? IPhone Price In Nepal 2020
काठमाडाैं- पछिल्लाे केहि समय देखि नेपालमा आईफोनकाे क्रेज बढ्दै आइहेको छ। एप्पल कम्पनी लगातार आफ्ना विभिन्न सिरिज अन्तरगत नयाँ माेडलका आईफोनहरू लन्च गरिरहेकाे छ भने विश्व बजारमा यसको डिमाण्ड पनि उतिकै बढ्दै गइरहेको छ।
आईफोन इलाभेन, इलाभेन प्रो, इलाभेन प्रो म्याक्स कम्पनीकाे बहुप्रतिक्षित र विश्व बजारमा धेरै बिक्रि भएकाे पछिल्लाे उत्पादन हाे। त्यस्तै एप्पलले केहि साता अघि आईफोन ९ अर्थात आईफोन एसई २०२० लन्च गरेकाे थियाे। कम्पनले अब छिट्टै नै आईफोन १२ पनि विश्व बजारमा उपलब्ध गराउने खबर पनि सुनिदै आएकाे छ।
आईफोन एसई कम्पनीको अहिले सम्मकै सबैभन्दा सस्तो आइफोन हो। कम्पनीले यसको सुरुवाती मुल्य ३ सय ९९ अमेरिकी डलर तोकेको छ। जसको नेपाली मूल्य करिब ४८ हजार ८ सय ७० रुपैयाँ पर्न आउँछ। जसकारण अहिले यसको चर्चा निकै बढेको छ। अबकाे केहि महिनामा यो आइफोन नेपाली बजारमा पनि आउने अनुमान गरिएकाे छ।
अहिलेसम्मकै सबैभन्दा सस्तो आईफोन सार्वजनिक, नेपालमा कति पर्ला ?
त्यसाे भए नेपाली बजारमा आईफोन इलाभेन, इलाभेन प्रो, इलाभेन प्रो म्याक्सकाे मूल्य कति छ त? आउनुहाेस् यसबारे चर्चा गराैं !
एप्पल नेपालका लागि एक मात्र आधिकारिक विक्रेता जेनेरेसन नेक्स्ट (Generation Next - GenNext) ले आइफोन इलाभेन, इलाभेन प्रो, इलाभेन प्रो म्याक्स बजारमा बिक्री गर्दै आएकाे छ। नेपाली बजारमा आइफोन इलाभेन सार्वजनिक हुनुअघि नै नेपालमा यसको अवैध तरिकाबाट विक्री वितरण भइरहेको थियाे।
आधिकारिक, वारेन्टी भएको फोन जहाँ पायो त्यहाँ नकिन्न जेनेरेसन नेक्स्टले सबैसँग आग्रह समेत गर्दै आइरहेकाे छ। जेनेरेसन नेक्स्टको वेभसाइटमा गएर आइएमइआइ नम्बर हालेर तपाइँले किन्नु भएको आइफोन वैध हो कि अवैध तरिकाबाट ल्याइएको हो भन्ने हेर्न सकिने कम्पनीले जनाएकाे छ।
आइफोन इलाभेन, इलाभेन प्रो, इलाभेन प्रो म्याक्सको मूल्य नेपाली बजारमा यसप्रकार छन्:
६४ जिबीको १ लाख १० हजार
१२८ जिबीको १ लाख १८ हजार
२५६जिबीको १ लाख ३४ हजार
६४ जिबीको १ लाख ५७ हजार
२५६ जिबीको १ लाख ८० हजार
५१२ जिबीको १ लाख ११ हजार
इलाभेन प्रो म्याक्स:
६४ जिबीको १ लाख ७० हजार
२५६ जिबीको १ लाख ९६ हजार
५१२ जिबीको २ लाख २७ हजार
आइफोन इभो स्टोर,ओलिज स्टोर, मोबाइल ट्रोन फ्युचर टेक ट्रेड र फ्युचर वल्र्ड बाट पनि किन्न सकिने छ।
#एप्पल #आईफोन एसई #आईफोन
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख १९, २०७७ १७:२८
जिल्ला युवा समिति पर्साको अध्यक्षमा अमिताभ बच्चन दास तत्मा नियुक्त